ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းများ – DVB
ငယ်ရွယ်ချိန်မှာ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းများ
Published By DVB | 18 November, 2018
အားလုံးကြားသိပြီးလောက်ဖြစ်မယ့် စိတ်မကောင်းစရာ သတင်းတစ်ခုကတော့ သရုပ်ဆောင်မင်းသွေးဟာ အောက်တိုဘာ ၃ရက်ညဘက်မှာ ဘောလုံးကစားနေရင်း ရုတ်တရက်ဆုံးပါးသွားရတဲ့ကိစ္စပါ။ ကျန်းကျန်းမာမာနဲ့ ငယ်ရွယ်တဲ့အသက်အရွယ်မှာ ဆုံးပါးသွားရတဲ့အတွက် သေဆုံးမှုဟာ ထူးဆန်းပြီး အံ့သြဝမ်းနည်းစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ ဒီအတွက် အသက်ငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာ သေဆုံးမှုရဲ့ ဖြစ်နိုင်ခြေအကြောင်းအရင်းများကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ သတိပြုနိုင်အောင်နဲ့ ကာကွယ်လို့ရမယ့်အရာတွေကို ကြိုတင်ကာကွယ်နိုင်အောင်၊ အရေးပေါ် ပြုစုမှုပေးနိုင်အောင်တို့အတွက် ရည်ရွယ်ပါတယ်။ ကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာ မမျှော်လင့်ဘဲ ရုတ်တရက် သေဆုံးမှုအကြောင်းအရင်းများဟာ နှလုံးနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ ရောဂါများကြောင့် အများစုဖြစ်ပါတယ်။ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့ရောဂါတွေကတော့-
၁။ နှလုံးကြွက်သားများ ထူထဲသည့် ရောဂါ (HCM)
မျိုးရိုးလိုက်တဲ့နှလုံးရောဂါဖြစ်ပြီး နှလုံးရဲ့ ကြွက်သားတွေထူထဲနေပါတယ်။ ထူထဲနေတဲ့ ကြွက်သားနံရံတွေက နှလုံးခုန်အောင် ပြုလုပ်ပေးတဲ့ လျှပ်စီးပတ်လမ်းကို အနှောက်အယှက်ပေးတဲ့အတွက် နှလုံးခုန်မမှန်တော့တာတွေဖြစ်ပြီး ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ပါတယ်။ အားကစားသမားတွေနဲ့ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလုပ်သူတွေ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုရဲ့ အကြောင်းရင်းအတော်များများဟာ ဒီရောဂါကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါဟာ ရှိနေမှန်း မသိသာတတ်ပါဘူး။
၂။ နှလုံး သွေးကြောများ မူမမှန်သည့်အခြေအနေ (Coronary artery abnormalities)
တချို့လူတွေမှာ မွေးရာပါ နှလုံးသွေးကြောတွေ မူမမှန်တာမျိုးဖြစ်နေနိုင်ပါတယ်။ အားကစားလုပ်တဲ့အချိန်မှာ ဒီသွေးကြောတွေကို ဖိခံရတာကြောင့် နှလုံးကိုသွေးမပို့နိုင်တော့ဘဲ သေဆုံးတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
၃။ နှလုံးခုန်မမူမှန်သည့်ရောဂါ (Long QT syndrome)
ဒီအခြေအနေဟာလည်း မွေးရာပါဖြစ်ပြီး နှလုံးခုန်မူမမှန်တာတွေဖြစ်ကာ အများအားဖြင့် သတိလစ်မေ့မြောသွားတာမျိုးတွေနဲ့ ပြတတ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါရှိတဲ့လူငယ်တွေဟာလည်း ရုတ်တရက်သေဆုံးနိုင်ခြေမြင့်ပါတယ်။
၄။ အဆုတ်သွေးကြော ပိတ်ဆို့ခြင်း (Pulmonary Embolism)
ဒါကတော့ လူငယ်တွေမှာ အရမ်းအဖြစ်နည်းပါတယ်။ သွေးကြောဆိုင်ရာ ရောဂါတွေရှိနေတတ်ပြီး လှုပ်ရှားမှုနည်းပါးတဲ့ အသက်ကြီးသူတွေမှာပိုဖြစ်ပါတယ်။ ခြေထောက်မှာစပြီးဖြစ်တည်လာလေ့ရှိတဲ့သွေးခဲက ပြုတ်ထွက်ပြီး နှလုံးကနေ အဆုတ်ကိုသွားတဲ့သွေးကြောမှာ ပိတ်ဆို့တာကြောင့် သေဆုံးမှုဖြစ်တာပါ။ လေယာဉ်အချိန်ကြာကြာ စီးရတဲ့သူတွေ၊ အိပ်ယာထဲမှာ အကြာကြီးနေရတဲ့သူတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
အများအားဖြင့်တော့ ရုတ်တရက်သေဆုံးသွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာ ကာကွယ်ဖို့ အချိန်မမီလိုက်တာ မသိလိုက်ဘဲ ဖြစ်သွားတာတွေဖြစ်ပါတယ်။ ငယ်ရွယ်ပေမယ့် ဒီလက္ခဏာတွေရှိနေတယ်ဆိုရင် သတိထားရပါမယ်။ ၁။ သတိလစ်မေ့မြောတတ်ခြင်း – အားကစားလုပ်တဲ့အခါ ပင်ပင်ပန်းပန်းလှုပ်ရှားတဲ့အခါမှာ မူးမိုက်လဲကျတာ၊ သတိလစ်သွားတတ်တာတွေက နှလုံးမှာပြဿနာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုပြသပါတယ်။ ၂။ မိသားစုမျိုးရိုးရှိတာ – နှလုံးရောဂါတွေဟာ မျိုးရိုးလိုက်တတ်ပါတယ်။ မျိုးရိုးထဲမှာ ရုတ်တရက်နှလုံးရပ်သေဖူးတဲ့သူတွေရှိရင် ကိုယ်လည်းသတိထားရပါတယ်။ ၃။ အသက်ရှူမဝခြင်း ၄။ ရင်ဘတ်အောင့်ခြင်း ၅။ နှလုံးခုန် အလွန်အမင်းမြန်လာခြင်း၊ သို့မဟုတ် ခုန်ချင်သလိုခုန်ခြင်း ၆။ အဝလွန်ခြင်း၊ ဆီးချိုသွေးတိုးရှိခြင်း ဒါတွေကို လျှော့ချပါ။ ရုတ်တရက်သေဆုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်
မျိုးရိုးရှိတယ်ဆိုရင် နှလုံးကို စစ်ဆေးမှုခံယူပါ။
အိပ်ရာထဲမှာ ကြာကြာနေရရင် ထိုင်ပြီးသွားရတဲ့ခရီးရှည်သွားရရင် မကြာခဏ လမ်းလျှောက်ပေးတာ၊ ခြေထောက်ကိုလှုပ်ပေးတာတွေလုပ်ပါ။
ကိုယ့်ရှေ့မှာ နှလုံးအမောဖောက်ပြီး လဲကျသွားတယ်၊ သတိလစ်သွားတယ်ဆိုရင် ဒါတွေကိုအရေးပေါ် အမြန်အဆန်လုပ်ပေးပါ။ ၁။ အကူအညီကို အော်ဟစ်တောင်းခံပါ။ ဆေးရုံကားအရေးပေါ်ခေါ်ပါ။ ၂။ အသက်ရှူနေလား၊ နှလုံးခုန်နေသေးလားဆိုတာကို စမ်းသပ်ပါ။ ၃။ အသက်မရှူ၊ နှလုံးမခုန်တော့ဘူးဆိုရင် အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းကို စတင်ကျင့်သုံးပါ။ ၄။ အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်း လုပ်ထုံးလုပ်နည်း
ရင်ညွှန့်ရိုးအလယ်ကို လက်နှစ်ဖက်ကို ထပ်ပြီးဖိပါ။ တစ်မိနစ်ကို အချက် ၁၀၀ နှုန်းနဲ့ မှန်မှန်ဖိရပါမယ်။
ပက်လက်အနေအထား အတည့်ထားပြီး မေးစိကို အပေါ်ကို တွန်းတင်လိုက်ပါ။
ပါးစပ်ခြင်းတေ့ပြီး လေမှုတ်သွင်းပါ။ လေမမှုတ်သွင်းခင်မှာ လေဝင်လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့နေတဲ့အရာတွေကိုအရင်ဖယ်ရှားပါ။
၅။ ဆေးရုံကားနဲ့ ကူညီကယ်ဆယ်ပေးမယ့် ကျွမ်းကျင်သူတွေရောက်မလာခင်အထိ အရေးပေါ်အသက်ကယ်နည်းကို လုပ်ဆောင်ရပါမယ်။ အရေးပေါ်အသက်ကယ်တဲ့နည်းလမ်းဟာ ရိုးရှင်းလွယ်ကူပြီး အသက်ပေါင်းများစွာကို ကယ်တင်နိုင်တဲ့အတွက် Youtube လိုနေရာကနေ လုပ်နည်းကို သင်ယူလေ့လာထားသင့်ပါတယ်။ ရေးသားသူ Dr. Thurein Hlaing Win. ဆေးပညာပိုင်းဆိုင်ရာတည်းဖြတ်သူ Dr. Thurein Hlaing Win. ဤဆောင်းပါးကို DVB ၏ မိတ်ဘက် ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာဝက်ဘ်ဆိုဒ် hellosayarwon.com မှ ကူးယူဖော်ပြပါသည်။